Natiijada Sare ee Google oo leh Semalt
Internetku wuu buuxsamay macluumaadka. Inteena ugu badan waxaa naga buuxsamay waraaqo, warar, farriimo aan u baahanahay inaanu ku eegno nolol-maalmeedkayaga. Kumaan kun oo websaydh ayaa ku wada nool meeraha dijitaalka ah, oo inbadan oo ka mid ahi runtii yihiin xafiiltanno. Marka sidee baan ugu guuleysan karnaa ganacsi shuruudahaas? Dabcan, dhiirrigelinta dijitaalka ah waxay leedahay qawaaniin u gaar ah iyo kuwa, kuwaas oo fahamsan inay si wanaagsan ugu guuleystaan tartankan.
Shaki la’aan, socodsiinta meherad internetka ah aad ayey uga duwan tahay waxkasta oo aad ku noosho nolosha dhabta ah si aad u kasbato daqli una gaadho koritaanka meheraddaada. Kuwa bartaa qaanuunku waxay ku guuleysan karaan guul. Marka isticmaalista kobcinta websaydhadu waxay ka caawineysaa inaad tusto badeecadaada ama adeegyadaada. Meheraddaadu waxay u muuqan kartaa macaamiisha iman kara.
Waxay muhiim u noqon kartaa milkiilayaasha ganacsiga, khubarada xiriirka bulshada, iyo maareeyayaasha iibka inay wax ka bartaan qaababka cusub ee loo adeegsado aaladaha websaydhka si wax ku ool ah. Wax kasta oo aad sameysay si aad lacag ku kasbato waxaa loo wanaajin karaa natiijo wanaagsan.
Helitaanka gargaarka xirfadeed ee kooxda Semalt, ganacsigaagu wuxuu ku gaari karaa natiijooyinka ugu sarreeya ee Google wuxuuna gaari karaa faa'iidada aad ku riyootay.
Ma tahay fursad kasta oo aad ku hesho natiijooyinka ku kobcinaya meheraddaada Internetka naftaada?
Halkan ama halkaas, waxaan ka helnaa sheekooyin rag iyo dumar nasiib badan oo ku kasbaday lacagtooda si fudud Websaydhka Adduunka. Dabcan, runtii waa dhiirrigelin. Laakiin sheekooyinkaas badiyaa waa natiijooyinka nasiib wanaag, hal-abuurnimo ama kadis. Laakiin miyaad hubtaa fikradahaaga cusub ee dhiirrigelinta si aad lacag weyn ugu isticmaasho? Miyaad lahaan lahayd awood ku filan oo aad ku barto naftaada, adoo wakhti badan ku bixinaya halka kuwa aad la tartantaa laga yaabo inay la shaqeeyaan xirfadle si ay u gaadhaan himiladooda? Haddii aadan aqoon sida saxda ah ee la sameeyo, waxay ku qaadaneysaa waqti badan in la fahmo sida ay u shaqeyso. Haddii ay dhacdo inaad wax walba si sax ah u helin, lacag bixinta dalacsiinta waxba looma dhuminayo.
Miyaad kordhineysaa taraafikadaaga elektaroonigga ah adigoon helin caawimaad dheeri ah, intee ayey qaadaneysaa? Shaki la’aan, waxaa muhiim ah in aad aqoon u leedahay kor u qaadista internetka. Waad aqrin kartaa macluumaad badan, waad ka qeyb geli kartaa shabakadaha internetka, waad ka qeyb qaadan kartaa koox ama koorsooyin shaqsiyadeed. Tallaabo talaabo ah, waxaad ka heli doontaa macluumaad cusub ilo kala duwan, laakiin intaas oo dhan ka dib, waad ka xumaan kartaa natiijada. Si fudud dadaaladaagu kuma filnayeen inaad wax walba si sax ah u abaabulaan. Xaaladdaas oo kale, ganacsigaagu wuxuu lumin doonaa fursadaha koritaanka toddobaadyo iyo bilo. Qof kasta waa inuu ka fikiraa laba jeer waxa uga muhiimsan iyaga kiiskan. Ma aqbali doonaan dhaqaalahan wajiga soo koraya, mise waa inay maalgashadaan dakhligooda mustaqbalka si xikmad leh si ay natiijada u helaan si dhakhso ah oo hufan?
Aaladda xiriirinta khadka tooska ah ee ganacsigaaga
Maalmahan, bakhaarada internetka ayaa runtii caan noqday. Dadku guryahooda bay ku joogi karaan oo waqti fiican ayey ku qaadan karaan inta ay wax iibsanayaan, si ay nolol ugu helaan waxyaabaha dhabta ah. Alaab iyo adeeg waad ka iibsan kartaa qayb ka mid ah meeraheena, oo waxay u dhici kartaa si dhakhso badan sidii ay suurtogal ahayd sannadihii hore. Duruufahaas, waxaa muhiimad gaar ah leh in adeeggaaga laga dhigo mid kaamil ah, aamin ah, fiiro gaar ah u yeelo qof kasta, oo aad ka caawiso iyaga inay hoggaamiyaan xulasho wanaagsan. Ha iloobin adeegga iibka kadib.
Maxaad yeelaysaa haddii dad aad u tiro badani ay soo booqdeen bartaada oo u baahdeen jawaabahooda su'aalahooda? Waa inaad weli iyaga uga farxisaa dukaanada internetka. Xaqiiqdii waa lagama maarmaan in la helo macaamiillo joogto ah ama xitaa kuwa raacsan sumadda. Taasi waa sababta milkiilayaasha ganacsigu ay ugu baahan yihiin inay adeegsadaan aaladda Semalt SEO oo taageero ka heleysa xirfadlayaal xirfad u leh. Maaddaama adiga iyo kooxdaadu aysan haysanin waqti ku filan oo aad ku siisaan qof walba caawinaad iyo taageero haddii ay badan yihiin. Dadku ma jecla inay sugaan, markaa ganacsatada waa inay saadaaliyaan xaaladdan oo ay horay ugala shaqeeyaan xirfadlayaasha.
Abuuritaanka istiraatiijiyad suuq geyn oo caqli gal ah nooc kasta oo ganacsi ah, waxaad u baahan tahay inaad ku darto miisaaniyadda aaladaha SEO ee awoodda badan oo shaqeynaya. Waxay saameyn fog ku yeelan doontaa talo bixinnada lataliyeyaashayada qaarkood.
Miisaaniyadaha noocyadooda kala duwan ayaa la heli karaa si qof kasta u dooran karo midka ugu habboon. Waxaad soo jiidan kartaa iibsadayaasha u baahan badeecadaada iyada oo gacan ka heleysa adoo adeegsanaya xeelado suuq geyn ah, dabcan.
Ma u malaynaysaa inay fududahay in la iibiyo? Way fiican tahay in alaab laga soo iibsado dukaanka internetka ee si caqli leh loo abuuray. Way fududaan lahayd inaad iibiso haddii aad abuurto istiraatiijiyad kugu kicin doonta. Faa'iidooyin ka hel, talo weydiiso, iyo caawimaad dadka aad ugu guuleysatay marar badan. Waad kobcin doontaa iibkaaga waxaadna macaamil ganacsi la yeelan doontaa macaamiishaada, kuwaas oo kaala talin doona adeegyadaaga. Isku xirnow, muuji faa'iidooyinkaaga, oo ka dhig macaamiisha suurtagalka ah inaad xiiseyneyso.
Adeegga Shabakada Semalt
Caawinta aaladaha internetka, daqliga ayaa kor u kici lahaa. Waxay dhici doontaa maxaa yeelay degelkaaga wuxuu awood u yeelan doonaa inuu dad badan oo cusub la falgalo, laakiin wuxuu noqon lahaa macaamiil ka yimid hal gobol. Istaraatiijiyad ay diyaarisay khabiirka Wakaaladda Dijital ah, waxaad ku gaari kartaa gobollada kale, waddammada, iyo qaybaha kala duwan ee adduunkeenna. Marka Semalt kaliya ma bixiyo qalabka SEO ee sidoo kale wuxuu horumariyaa istiraatiijiyadda si looga caawiyo ganacsigaaga inuu adduunka oo dhan ka shaqeeyo oo caan noqdo. Waxaan horumarin karnaa kartida mashiinka raadinta. Hay'addeenna waxay ku siisaa caawimaad xirfad-yaqaan ah sidii loo dooran lahaa ereyada furaha ah ee sida saxda ah ugu habboonaan kara howlahaaga ganacsi.
Semalt wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hesho macluumaadka ku habboon ee ku saabsan xafiiltanka, xogta joogtada ah ee ku saabsan qaybta suuqaaga ama warshadahaaga. Waxay suurta gal noqon doontaa in la hubiyo cabbiraadaha warbaahinta bulshada, hagaajinta dadaalkaaga iyo joogitaankaaga si waafaqsan.
SEO ayaa runtii muhiim u noqon doona qarnigan. Maalgalin lacag macquul ah oo iskaashi maalmeedka, milkiilaha ganacsigu wuxuu ku heli doonaa shirkad si joogto ah u koraya. Summadaadu waxay heli doontaa taraafikada dabiiciga ah ee matoorada raadinta. Khaladaadkii ganacsi ee hore waxaa loo baabiin lahaa mid mid. Dabcan, qofna waa kaamil, khaladaad yar ayaa dhici kara, laakiin istiraatiijiyad suuq geyn adag ayaa shirkadda u horseedi doonta guul.
Horumarinta ganacsiga dhijitaalka ah iyo internetka ayaa sabab u ahaa muuqaalka Semalt. Waxay ahayd Sebtember 2013 markii dad aad u yar oo hal abuur leh, karti leh ay go'aansadeen inay noqdaan koox. Oo iyagu waxay ahaayeen aasaasayaashii Semalt oo abuuray mucjiso. Maalmahan shirkaddu waxay wax bartay, shaqaale xirfad leh iyo macaamiisha ku qanacsan adduunka oo dhan, iyagoo ka caawinaya dadka inay riyooyinkood noqdaan.
Maxaad u baahan tahay inaad ku ogaato meheraddaada maalmahan? Uma baahnid inaad soo booqato galmada ama saf ku soo gasho. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad la xiriirto khubaradeena Hay'adda Dijitaalka ah oo aad qaadatid tallaabooyin aad ku kobcinaysid meheraddaada. Waxay faa iido u noqon doontaa meelkastoo aad joogtid iyo waxa dhalashadaadu tahay. Haddii aad rabto in lagaa buuxiyo wicitaannada taleefannada iyo emaylka macaamiisha, kor u qaad iibintaada, oo aad uga faa'iideysato shaqadaada, kaliya sii wad akhriska.
Miyaad ka baqaysaa inaadan fahmin aaladda Semalt SEO? Macaamiisheena waxay ka yimaadeen wadamo badan oo kala duwan, sidaa darteed shaqaalaheena ayaa kugula hadli doona luqadda aad dooratay. Kaalay halkaan si aad u fiiriso liiska luqadaha. Macaamiishayadu waxay noo soo diraan ereyo mahadnaq ah oo ka caawiya iyaga horumarin iyo barwaaqo:
ADEEGYADA ROYAL (Xarunta Adeegga Apple). Adeegsiga Semalt FullSEO, shirkadan (oo fadhigeedu yahay Ukraine) waxay ku kordhisay taraafikada dabiiciga ah 300% wax ka yar hal sano!
Zaodrasle.si. Toban bilood oo lala shaqeynayay Semalt ayaa u oggolaatay dukaankan internetka ku saleysan Slovenia ee ku saleysan galmada inuu kordhiyo taraafikada dabiiciga ah boggooda internetka 520%. Bil kasta tirada booqashooyinka ayaa kordhay 1216. Sidaas darteed, Zaodrasle.si waxay hadda noqotay shirkadda ugu horreysa ee shirkadda Slovenia qaybteeda suuqa.
Xariirka raadinta iyo iibsashada sharikadaha Xidhmada FullSEO waxay u suurtagelisay meheraddan inay kordhiso tirada Google TOP-10 furaha furaha illaa 5782, sidaas darteedna ku kordhisay taraafikada dabiiciga ah 303% 9 bilood gudahood. Maanta, shirkadani waa mid ka mid ah magacyada ugu caansan ee ku yaal warshadaha franchise ee Boqortooyada Ingiriiska.
Miyaad isticmaashaa internetka? Markaa waa inaad ogaataa waxa mashiinka baaristu yahay. Waxaad isticmaashay mid ama inbadan oo kamid ah. Ka mid ah noocyada kala duwan, Google ayaa ugu weyn. Sidee bay u shaqaysaa? Waxaad ku qortaa ereyga raadinta ama ereyada raadinta, dhagsii 'raadin,' mashiinka raadinta ayaa kuu soo celinaya liistada boggaga laga helay. Maxay qaarkood ugu jiraan safka sare ee natiijooyinka, halka kuwa kalena ay hoos ugu dhacayaan liiska? Statistics ayaa noo sheegay, inta badan dadka isticmaala kaliya hubiyaan jagooyinka ugu sareeya. Inaad halkaa joogto, waxaad u baahan tahay inaad gasho TOP-10. Si lagu muujiyo dusha sare ee natiijooyinka raadinta, waxaad u baahan tahay inaad qaaddo tallaabooyin, kuwaas oo hagaajin doona booskaaga liiska weydiimaha.
Injineerada Semalt waa khubaro ka dhigaya in bartaada ay ka muuqato booska koowaad ee Google TOP 10. Markaad halkaas joogto, taraafikadaada iyo iibkaaga internetka ayaa gantaala. Tirakoobyadu been ma sheegaan - ciidanka isticmaaleyaasha internetka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya. Waqtigaan, in ka badan seddex meelood meel dadka adduunka waxay ku jiraan internetka. Waxaad ubaahantahay inaad soo jiidato dhagaystayaashaan, maxaa yeelay waxaad leedahay ganacsi, waxayna leedahay lacag aad kubixiso. Kumanaan iyo kumanaan adeegsadeyaal ah ayaa ka raadsada badeecada la mid ah kuwaaga bogagga shabakadahaaga. Tartamayaashaada wareega ayaa higsanaya inay qabtaan jagooyinka ugu fiican natiijooyinka mashiinka raadinta. Maxaad u diidi weyday Waxaad u qalantaa inaad halkaas joogtid - markaa nolosha u sii yeel websaydhkaaga kobcinta mashiinka raadinta.
Dadku way jecel yihiin fiidiyowyada! Waxaan ku tusi karnaa waxaad sameyso fiidiyaha xayeysiinta ah ee qabow. Waxay kuu keeni doontaa macaamiil cusub isla markaana kobcin doonta beddelkaaga!
Falanqaynta goobta ganacsiga
Adduunkeena soonka, mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan waa macluumaad. Haddii waqtigeeda lagu helo, waad sixi kartaa talaabooyinkaaga dheeraadka ah oo aad ka fogaato khaladaadka xanuunka leh. Mid ka mid ah qaababka loo xakameeyo horumarka ganacsigaaga ayaa ah iyadoo la iska hubiyo xogta lafa-guristayada iyo saadaalinta horumarka mustaqbalka. Ka hel macluumaad macquul ah khadka tooska ah khubaradeena.
Kaliya qiyaas, qiyaastii seddex kun oo milyan oo dad ah ayaa noqon kara macaamiishaada mustaqbalka. Marka muxuu u iibsan waaya dukaanka tooska ah hadda? Waa wax laga xumaado, laakiin macaamiishaada mustaqbalka ayaa ku mashquulsan malaayiin iibiyayaal ah oo kula tartamaya soo qabashada iibsadayaasha iyo lacagtooda. Kuwaas xafiiltanku si fudud uma oggolaanayaan inaad gasho Google Top. Si aad ugu guuleysato orodka marathon-kan, waa inaad doorataa kooxda ugu xirfadda badan ee aad la shaqeyso.
Wadajir ahaan Semalt, waxaad ka heli kartaa habab cusub oo kor loogu qaado suuqgeyntaaga. Waxaan abaabuli karnaa adeeg dhammeystiran oo dhan oo ay ka mid noqon karaan: horumarinta dukaanka qadka, dib-u-habeynta sidoo kale kor u qaadistiisa iyo taageero farsamo oo aad u wanaagsan. La xiriir la-taliyayaashayaga oo aad ku guuleysato natiijooyinka ugu xiisaha badan xirfadlayaasha Semalt!
Maxay dadku noo doortaan?
Inta lagu guda jiro wada shaqeynta Hay'adda Dijitaalka ah, aqoonyahanadaada ayaa kaa taageeri doona 24 saac maalintii, 7 maalmood usbuucii. Waxay fahmi doonaan faahfaahinta ugu yar ee ganacsigaaga internetka.
Waxaan horeyba ugu guuleysanay in kabadan 800 000 oo-kajaan oo waan dhameynay. Waxaan iskaashi la sameynay in kabadan 300 000 macaamiil. Waad ka hubin kartaa dhamaan mashruucyada bartayada internetka.
Qiimaha macquul ah ee natiijada ugu fiican
Macaamiisheenu waxay qaddariyaan tayada shaqadeenna ee la xiriirta heerarka isbeddelka iyo qiimeynta soojiidashada leh.
Ugaarsiga mashiinka baarista buuxda
Marka ugu horeysa, mashruucaagu wuxuu lahaan doonaa maamule shaqsi ah oo mas'uul ka noqon doona dhammaan howlaha aan bixino. Waxaan soo qaadan doonaa macluumaad dhameystiran oo ku saabsan tartamayaashaada kahor. Qaab dhismeedka goobta ayaa la falanqayn doonaa. Si loo soo jiito dhagaystayaasha bartilmaameedka ah, kooxdeena SEO waxay soo qaadaneysaa ereyada furaha ee ugu habboon iyagoo ay weheliso boggag xayeysiin ah oo ku saabsan weedho la xiriira. Websaydhkaaga waxaa laga hubin doonaa miirayaasha Google. Khabiirkayagu wuxuu si taxaddar leh u horumarin doonaa istiraatiijiyad ficil dheeri ah
Talooyin yar ayaa kor u qaadaya ilaha internetka
Waxaan si xoogan kuugula talineynaa isticmaalka talooyinkaan. Waxay ka dhigi lahayd ganacsigaaga mid tartan badan. Websaydhkaaga ayaa ka fogaan doona xannibaadaha, iyo soo-gelintaada ayaa hubaal ah inay noqon doonto mid waxtar badan.
Si aad u hubiso oo aad u tafatirto koodhka HTML si looga dhigo mid kaamil ah;
In la abuuro calaamado iyo astaamo sida caadiga ah makiinadaha raadinta caadiga ah;
Si aad u sameyso calaamadaha meta ayada oo la adeegsanayo ereyada furaha ah.
Bixinta kobcinta, waxaan xireynaa xiriirinno jajaban. Sidookale, waxaan abuurnaa inta ugu macquulsan xiriiriyeyaasha kheyraadka la dalacsiiyay. Aad ayey muhiim u tahay in la saxo feylasha robots.txt iyo .htaccess. Ficilkani wuxuu saameyn wanaagsan ku yeelan doonaa aragtida websaydhka ee qiimeynta mashiinka raadinta.
Malaha waxaa jira ereyo badan oo cusub iyo ereyo aan la garaneyn? Ma dooneynno inaad jahwareer badan gasho. Laakiin taasi ma ahan wax sahlan in lagu caan baxo World Wide Web. Waxay u baahan tahay aqoon gaar ah iyo khibrad guul leh oo laga gaadhay mashaariicdii hore. Iyada oo ay weheliso kooxdeena khubarada caqliga iyo saaxiibtinimada leh, waxaad heli doontaa olole SEO awood badan leh. Websaydhkaagu wuxuu u muuqan doonaa macaamiisha iyo dadka daneynaya howlahaaga ama alaabadayada annaga oo gacan ka heleyna.
Meel kasta oo aad ku nooshahay ama luuqaddee aad ku hadashaa Waxaad yeelan kartaa nooc ganacsi oo kasta, anagana waxaan kuu heli doonnaa xal. Bakhaarka maxalliga ah ama qaybinta gawaarida, shirkad kastaa waxay noqon kartaa mid qurux badan. Isku day inaad ku hagaajiso meheraddaada Hay'adda Dijitaalka ah oo aad ku guuleysato natiijooyinka ugu wanaagsan!